Iifowuni zobunjani beefoto - Ngaba zinenzuzo na? - Make.id
Iinkampani ziqhubela phambili, kwaye ezininzi iinkqubo ziya kulungelelaniswa ngakumbi kunokuba zaziqhelekile. Siphila kuluntu apho kukho izinto ezininzi ezenziwa ngokusetyenziswa kwezicwangciso ezibalwe endaweni yokuqikelela. Oku kubangelwa ukuba iinkampani, abantu ngabanye kunye noorhulumente bathatha ukusetyenziswa kwamakhadi okuchonga imifanekiso ngokugqithiseleyo ngaphambili.
Ziziphi izinto ongaqinisekanga ngazo?
Nangona siphila kuluntu oluphambili, kukho abo abangayiqondi ukuba yeyiphi idilesi ze-ID yomfanekiso. Ukuba ngaba kwenzeka ukuba phakathi kwabantu abanjalo, kuyafaneleka ukuba ugqibe ekubeni kufuneka uhleli emqolombeni. Oku kungenxa yokuba amakhadi e-ID ayenamalungelo athile okunyusa umlomo apho nabani na inkqubo abanokuyonwabela.
Xa ukhe uzibuza ukuba zeziphi izibonelelo, qiniseka ukuba ufunde le post ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. Kuza kubonakalisa kwiintlobo ezininzi zeempawu zamakhadi e-ID. Ukuba ulawula ibhizinisi okanye intlangano, kubaluleke kakhulu ukuba ufumene ezi ntlawulo ukuba wenze isigqibo malunga nokuba ungasetyenziswa njani.
Kanye njengoko kuchazwe ngasentla, ihlabathi libonakala lihamba phambili ngezinga elingalindelekanga. Oku kubonakala ngakumbi kwinkalo yobugcisa. Nangona kunjalo, kukho ukungakhuselekanga okwandisiweyo kunye nobungozi obubangelwa ziisongelo ezibuqhetseba. Ukuba uqhuba umbutho, akungabazeki ukuba uya kucinga ukuba le ndoda ingasombulula njani.
Kukho enye indlela ephuma ngayo ingcamango wenze ikhadi lakho le-id. Oku kuya kunceda ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko luphuculwe njengemisebenzi yolwaphulo-mali iya kuhliswa kwi-barest encinci. Njengomnini-shishini, kuba nzima ukufumanisa bonke abasebenzi bakho ngokusebenzisa amakhadi e-ID yomfanekiso. Uyakumangalisa indlela oku kuya kukwazi ngayo ukunciphisa imiba enxulumene nobuqhetseba nokusela.
Awukwazi ukuthetha ngokusebenza kakuhle ngaphandle kokuqwalasela indlela yokwenza ikhadi lakho le-id kwisistim. Oku kufana nokuzama ukwakha iinqwelomoya emoyeni njengoko kungayi kuze kusebenze. Yonke inkqubo eqhubele phambili kwaye isebenze ngempumelelo namhlanje yenza oko kusekelwe ekusebenziseni kwamakhadi e-ID. Le ithemplate eye yangqina ukuba isebenza ngokuphindaphindiweyo.
Ngokomzekelo, ukuba ulawula ibhizinisi, kuba lula ukunika abaqeshwa bakho indima kwaye bahlole. Uya kumangaliswa ukuba iirekhodi ezixhasayo ziya kugcinwa kwaye zilawulwe njani. Ukusetyenziswa kwekhadi lesazisi kwenza ukuba ukwazi ukuphepha ukudala iirekhodi eziprintiweyo. Oku kubangelwa ukuba abasebenzi abaye banikwe iindima ziza kuhlolwa kwaye zilawulwe ngokulula.
Umthetho ulingana nokuthembela, kwaye ukuba ungenayo, ishishini lakho lingahambi kude. Into yokugqibela ofuna ukuyenza iqala ukucinga ukuba abantu ababoni indlela izinto ezenziwa ngayo kwi shishini lakho. Abaxhasi bakho baya kufunda ukukuthemba ngakumbi xa bebona ukuba usebenzisa amakhadi e-ID.
Enye yezizathu zokuba ufanele udibanise nomenzi wekhadi namhlanje ukunika umbono ochanekileyo malunga neshishini lakho kunye nokuba lithetha ntoni. Akukona konke malunga nokwenza amabango okwazi ukuhlala. Endaweni yoko, abathengi abakhona nabakhoyo bafuna ukukubona uthathe inyathelo uze ubonise ukuba usebenza ngendlela efanelekileyo njengoko ubango.
Le yinye inzuzo ephezulu yamakhadi obunikazi kunye nokuba kutheni ufuna ukudibanisa nomenzi wekhadi namhlanje ngaphambi kokuba liphule. Ngaba uke wazama ukungena kwindawo kwaye uphenduke? Oku kunokuba neentloni. Nangona kunjalo, kukho isisombululo esinokusetyenziswa kwekhadi le-ID. Njengento elula njengokuba oku kungavakalayo, inyaniso ihleli ukuba ikhadi le-ID liya kukunceda ufikeleleke lula kwiindawo ongeke ukwazi ukungena kuzo.
Oku kungenxa yokuba ibonisa yonke imininingwane yakho yangemvelaphi. Abantu abayi kukhululeka xa beqaphela ukuba awunayo ikhadi le-ID yekhadi.
Ekugqibeleni koku ngasentla, kubonakala ukuba ikhadi le-ID liyimfuneko kuyo nayiphi na inkqubo okanye isicwangciso esifuna ukusebenza kunye nenqanaba eliphezulu kakhulu lokusebenza kakuhle. Oku kusekelwe kwiingeniso eziphezulu ezingenakho ukunikela njengoko kuchaziwe ngasentla. Kwakhona kubonakala ukuba ikhadi le-ID liyimfuneko kubantu abazimeleyo, amabhunga karhulumente kunye nenkampani.